FIFAMPITIFIRANA TAO TSARATANANA
Nandritra ny adiny telo sy sasany ny fifampitifirana tao Tsaratanàna. Izany dia teo amin’ny dahalo niova fo sy ny dahalo mpanao fakana an-keriny.
Ny tena anton-dian’ireo olon-dratsy dia ny hamono ny lehilahy iray antsoina hoe Rija, nanome vaovao ny zandary momba ireo mpaka an-keriny namany taloha, fony izy jiolahy. Ireo dahalo indray no maty rehefa nifanandrina tamin-dRija. Telo no lavony ary nanao tari-dositra ny ambiny avy eo. Ny fokonolona izay nifanena tamin’ireo olon-dratsy indray no niharan’ny rihitra ka notifirin’ireo olon-dratsy, nanalany ny fony.
NAFINDRA TOERANA IREO MARARY
Voatery tsy maintsy nafindra maika ny marary teo anivon’ny sampana Neuro-Chirurgie tao amin’ny hopitaly CHU JRA Ampefiloha nanomboka ny alin’ny alarobia teo. Ny antony dia satria nisy firehetana tao amin’ilay toerana vokatry ny fifampikasohan’ny herinaratra. Natahotra mafy ny mpiambina marary ary nihorohoro koa ny marary vokatr’ilay firehetana tampoka. Ny setroka rahateo vetivety dia niparitaka tao amin’ny efitra. Omaly hariva izy ireo vao naverina tao amin’io sampana io rehefa voalamina avokoa ny rehetra.
ZANDARY NARATRAN’NY DAHALO
Zandary miisa dimy no naratra mafy voatifitra ny dahalo tao amin’ny fokontany Isaorana, ao Matsiatra Ambony. Voatery nampiasana helicoptère ny nanalana azy ireo tao an-toerana ka nentina avy hatrany tany amin’ny hopitalin’i Fianarantsoa. Nentina niverina indray ny angidimby ary nanaovana savahao ireo olon-dratsy. Hatramin’ny omaly dia mbola mitohy ny ady anaty akata tao an-toerana.
Ofisie iray sy inspektera iray eo anivon’ny polisy no karohin’ny BC fatratra nanomboka ny talata teo. Nanafika teratany Srilankais iray izay nivoaka tao amin’ny Sakamanga tetsy Antsahavola izy ireo. Io vahiny io dia nitondra volamena « lingot » izay milanja dimy kilao teny aminy ary io no nalain’ireo polisy avy hatrany avy amin’ny alàlan’ny fanafihana mitam-basy. Efa hita ny basy nampiasan’ireo polisy rehefa natsipiny tao amin’ny tokotanin’ny trano misy ny vady aman-janany ihany. Mitohy ny fikarohana azy ireo. Fantatra koa fa fiaran’ny komisera iray no nampiasainy.
Zandary telo miasa ao Ambatofinandrahana no nosamborina ary notazomina ao amin’ny biraon’izy ireo. Ny antony dia voaporofo fa izy ireo ihany no manome ny vaovao rehetra ny dahalo tokony hosamborina ary manamora ny fanatontosan’ireo olon-dratsy ny asany. Namoahana didy avy hatrany ny fisamborana sy fitazonana ireo mpitandro ny filaminana ireo. Mbola hisy koa ny sazy anatiny izay miandry azy ireo ankoatra ny fanarahana ara-pitsarana.
Nandray lesona ihany ny andrim-panjakana ambony taorian’ny fanakianan’ny gazety azy. Niala tsiny ary nilaza fa filoha mpisolo toerana no mitazona ny antenimierandoholona. Raha tsiahivina, ny fampitam-baovao voalohan’ny prezidansa dia nosoniavina ho filohan’ny repoblika ary tsy niserana akory ny hoe mpisolo toerana.
Mbola manao ny di-dohany hatrany ny komisiona notendren’i Rolly Mercia izay hamoaka ny karatra maha matihanina ny mpanao gazety. Amin’ny voalohan’ny volana oktobra ho avy izao no hamoahana an-keriny an’izany. Tsiahivina fa orinasan-gazety miisa 22 eto an-drenivohitra sy any amin’ny faritany no tsy manaiky ity karatra tsy manara-dalàna ity. Na niova aza ny minisitra dia mbola notohizan’i Riana Andriamandavy VII hatrany ny tsy mety nataon’ny teo alohany dia ny fanekena io kaomisiona io. Midika izany fa mbola manana eritreritra ny hanery ny fahalalahan’ny mpanao gazety hatrany izy ireo.